को थिए प्रकाश दाहाल ? सशस्त्र याेद्धादेखी अार्यघाट सम्म, यस्ताे छ उनकाे कहानी (तस्विर हरू सहित) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०३, २०७४ समय: १८:४३:३६
इटहरी । आईतबार बिहानैदेखि मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रकाश दहालको निधनको खबरले छाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युको बिषयलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी समेत भईरहेका छन । माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाशको आईतबार बिहान निधन भएको हो ।
को हुन प्रकाश ?
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड सँग जोडिएर उनको नाम बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्थ्यो । राज्यकोषको पैसामा सगरमाथा चढ्दा उनको चर्को आलोचना भयो । त्यही क्रममा उनी बिना मगरसँग नजिकिए ।
यसबाहेक पनि कहिले प्रहरीको पोसाक लगाएर त कहिले बन्दुक बोकेर उनी विवादमा आइरहे। विपक्षी नेतामाथि सामजिक सञ्जालमा छुद्र टिप्पणी गर्नेदेखि अधिक मदिरा सेवनका कारण पनि उनी विवादमा आईरहे । बि.स २०३८ असार १७ गते जन्मिएका प्रचण्ड पुत्र प्रकाश १६ वर्षकै उमेरमा २०५४ सालमा पार्टी सदस्यता लिएर राजनीतिमा होमिएका हुन्। २०५७ सालदेखि उनी पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए।
०५७ सालदेखि नै उनी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा काम गर्न थाले। जनमुक्ति सेनामा जाने इच्छा राखे पनि उनलाई पार्टीले तत्काल स्वीकार गरेन। ०६० र ०६१ सालतिर उनी झन्डै एक वर्ष रुकुम , रोल्पातिर खटिए। सञ्चार विभागको जिम्मेवारी पनि उनलाई दिइएको थियो। प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुँदा दिदी रेणु र गंगासँगै प्रकाश राजधानीमा थिए। गोंगबुमा ६ कक्षामा पढ्दै गरेका प्रकाशसहित दिदीहरु समेतलाई प्रचण्डले भारत र्पुयाए। ०५३ मा दुवै दिदीको विवाह एकैसाथ भएपछि उनी दिदी रेणुको घर पन्जाब गए । त्यहीँ बसेर उनले पढाइ अगाडि बढाए।
जनमुक्ति सेनामा जाने इच्छा राखे पनि उनलाई पार्टीले तत्काल स्वीकार गरेन। ०६० र ०६१ सालतिर उनी झन्डै एक वर्ष रुकुम , रोल्पातिर खटिए। सञ्चार विभागको जिम्मेवारी पनि उनलाई दिइएको थियो।
बुवाको सचिवालयमा काम गरे पनि उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए। भारतमै उनले कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा पूरा गरे। नेपाल फर्केपछि रत्नराज्य क्याम्पसमा स्नातक तहमा भर्ना भए पनि उनले पढाइ पूरा गरेनन्।
सगरमाथा आरोहणका लागि पाँच वर्षअघि तत्कालीन सरकारले उनलाई २ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो।
शान्ति सम्झौताअघि प्रचण्डको अंगरक्षक भएर सँगसँगै हिँडेका प्रकाश विवादमुक्त भने कहिल्यै रहेनन्। व्यक्तिगत आचरण र बहुविवाहका कारण उनी विवादमा तानिए।
पत्नीसँगको झगडा र सम्बन्ध विच्छेदका कारण पनि प्रकाशको चर्को आलोचना भयो। पिता प्रचण्डका निकट मित्र पोष्टबहादुर बोगटीकी छोरी प्रभा बोगटीलाई छाडेर ०६४ माघ ३ मा पोखराकी सिर्जना त्रिपाठीसँग विवाह गरे प्रकाशले। सिर्जनाबाट पनि प्रकाशका एक छोरा छन्। विवाह दर्ता र छोराको जन्मदर्ता समेत नगरिदिएको भनेर आलोचित थिए उनी।
औपचारिक रुपमा सम्बन्ध विच्छेद नगरी उनले तेस्रो विवाह विना मगरसँग गरे। तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनमा रहेकी बिनासँगै २०५९ असार २१ देखि बेपत्ता भएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही नै गरेको थियो। त्यसपछि उनी केही समय भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली बसेका थिए। पार्टीले दुई वर्षसम्म साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। बिनातर्फ उनका एक छोरा छन्।
पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेपछि नै प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरेका उनी विनासँग विवाह गरेपछि निलम्बनमा परे। उनको जिम्मेवारी खोसियो। संविधानसभाको चुनावपछि २०७० माघदेखि भने पुनस् उनलाई सचिवालयमा पठाइयो। त्यसयता उनले बुबा प्रचण्डकै सुरक्षा सहयोगीका रुपमा खटिँदै आएका थिए। प्रकाशले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सुप्रवल जनसेवाश्री पदक भने बहिष्कार गरे।
उनले त्यो बेला फेसबुकमा वालमा ’आफू गणतन्त्र ल्याउनका लागि संघर्ष गरेको व्यक्ति भएको तर कुनै पदकका आकांक्षी नभएको’ स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्व.प्रकाशप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
काश्मिर आक्रमण : चार प्रहरी मारिए
राजस्थान र छत्तिसगढमा कङ्ग्रेस अगाडी, मध्यप्रदेशमा भाजपासँगसँगै
बेहोस नपारी२२ वर्षीय सर्फराजको मस्तिष्कबाट ट्युमर निकालियो